Iziphumo zomfanekiso we-35 we-CSS ongenakuphulukana nayo kwiwebhusayithi yakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | CSS, Imifanekiso
Namhlanje kukho imifanekiso kwiwebhu ziye zaba yinto ephambili yokubamba ingqalelo kumsebenzisi osondela kuzo zonke iintlobo zezihloko. Ukusuka ekufotweni, ekuhambeni, kwiimveliso nakwimiboniso yalo naluphi na uhlobo, imifanekiso yenye yezona zinto zibalulekileyo, ke ukuba siyakwazi ukuvelisa isiphumo esimangalisayo, loo foto iya kuba namandla okugcina umsebenzisi owe kwiwebhusayithi yethu.
Yile nto ininzi nje kwezi zinto zinokubanakho ukufikelela kuyo kubatyeleli bewebhusayithi. Iziphumo zeCSS ezibamba amehlo kwezinye iimeko Kwaye kwabanye banenjongo yokuba lula, nangona besoloko bephumeza oko sikufunayo sonke: ukuba umsebenzisi aqhubeke nokuhoya yonke into enikezelwa yiwebhusayithi yethu. Ngoku masidwelise iziphumo zomfanekiso ezingama-33 ze-CSS ezinomtsalane ngamandla.
1 Ulwelo olujija umfanekiso 3D
2 Impembelelo ye-3D hover
3 I-CSS 3D iPanorama
4 Imifanekiso kwindlela "ejikelezayo"
5 Iimfama zaseVenice
6 Ukwahlula umfanekiso
7 Ukuhambisa isiphumo somfanekiso
8 Isiphumo sempazamo
9 Umfanekiso onesiphumo
10 Ukuthambeka komfanekiso kwisiphumo sokuhamba
11 Isiphumo sokufiphaza
12 Hover yomfanekiso
13 Ukuhambisa isiphumo kwi-SVG
14 Ukusuka kumbhalo ukuya kumfanekiso wokuhambisa phezulu
15 Ukutyhila inxenye yomfanekiso ongasemva
16 Hambisa oopopayi
17 Ukulandelela isiphumo sokuhamba
18 Ukusondeza umfanekiso
19 Ukusondeza isiphumo sokunyusa
20 Impembelelo yeglasi
22 Ukugqitywa kweCSS
23 Hovy yemifanekiso
24 Ukugqunywa komfanekiso
25 Ukugquma umfanekiso
26 Ukugquma umfanekiso
27 Ukuhambisa isiphumo sokuhambisa umfanekiso
28 Ukuhambisa isiphumo ngemibhalo engezantsi
29 Iziphumo zokuhambisa i3D
30 Isikali somfanekiso
31 Isiphumo sethunzi se-iOS nge React
32 Uhlobo lweShadow iOS 10
33 Iziphumo zotshintsho lomfanekiso
34 Skrolela utshintsho lomfanekiso
35 Ukurola umfanekiso kunye nevili lempuku
Ulwelo olujija umfanekiso 3D
Esi siphumo somfanekiso siyamangalisa xa ukubola umfanekiso ube yityhubhu eyi-3D ekwaziyo ukujikeleza malunga nokuma nkqo kwayo ukuvelisa isiphumo esihle sokubonakalayo. Ngokusekwe kwi-CSS3D, ukuba uyakwazi ukuyiphumeza kwiwebhusayithi yakho, undwendwe alunakuthetha.
Impembelelo ye-3D hover
Enye into ebonakalayo ebonakalayo ukufezekisa loo nto xa sishiya isikhombisi semouse ngaphezulu komfanekiso, this kuwa ngokungathi ubethwa kwangokufanayo. Upopayi olukhulu lomnye umphumo womfanekiso.
I-CSS 3D iPanorama
I-HTML kunye ne-CSS ziyahambelana ukwenza ifayile ye Impembelelo enkulu yepanorama ngokungathi sasijonge phezulu kwisakhiwo esixekweni.
Imifanekiso kwindlela "ejikelezayo"
Un ulingelo olubonwayo enokusebenza ngenjongo ethile njengenxalenye yewebhu.
Iziphumo ezibonakalayo rhoqo shiya isikhombisi semouse ukuze itshintshe phakathi kokungafaniyo okubonelelwa ngumfanekiso.
Ngokuhambisa isikhombisi semouse ngaphezulu komfanekiso, yona iya kwandiswa ukuze yenziwe kakuhle.
Ukuhambisa isiphumo somfanekiso
Iziphumo zegridi ziveliswa xa ushiya el isikhombisi semouse ngaphezulu kwenqaku elithile ukusuka kumfanekiso.
Umfanekiso iskrola nefuthe lesipili njengoko sisilayida isikhombisi semouse ukusuka ekunene ukuya ekhohlo ngokuchaseneyo.
Isenzo esifuna projekthi isiphumo sokubonakalisa kumfanekiso esiyisebenzisileyo siphumo somfanekiso weCSS.
Ukuthambeka komfanekiso kwisiphumo sokuhamba
Unokufikelela ufumane isiyezi ukubona ukuba amacala omfanekiso avelisa isiphumo esothusayo kabini.
Njengoko sihambisa isikhombisi ngomfanekiso, ivelisa umphumo wokufiphaza iyanyamalala ngemizuzwana.
Kukho isiphumo se Ukufuduka ngomzuzu omnye apho sibeka khona isikhombisi imouse ngaphezulu komfanekiso.
Ukuhambisa isiphumo kwi-SVG
Isiphumo esihle sokuhambisa uveze umfanekiso ofihliweyo phantsi kwegama ngokwalo. Ukugqibezela okuhle kunye nokugqibeleleyo ukubonisa igalari yokuyila kunye nomdla.
Ukusuka kumbhalo ukuya kumfanekiso wokuhambisa phezulu
Isicatshulwa siwutyhila umfanekiso xa sihambisa isikhombisi semouse ngoopopayi abahlabayo ngempembelelo engaboniyo evula embindini.
Ukutyhila inxenye yomfanekiso ongasemva
Njengokuba besisesandleni sethu umnqamlezo welensi yefowuni, Inxalenye yomfanekiso ongasemva uyatyhilwa njengoko sihambisa isikhombisi semouse.
Impembelelo enkulu, kodwa ilula kakhulu ekubunjweni kwayo. Ukuba ukhangela into elula kwaye encinci, esi siphumo siya kukwenza ukuba uthandane.
Ukulandelela isiphumo sokuhamba
Okunye ukusebenza ngokulula ngenjongo ethile.
Nguwo Iziphumo zoom zoqobo Ngokuqinisekileyo uya kufuna ukuthatha kwiwebhusayithi yakho ngoku.
Ukusondeza isiphumo sokunyusa
Enye into enje zoom ukusebenza xa sishiya isikhombisi imouse ibekwe emfanekisweni.
Njengoko igama layo libonisa, i Isalathiso sempuku siya kujika phezu komfanekiso kwiglasi enkulu eyenza ukuba ibe nkulu.
Un I-CSS emsulwa yomaleko ebekwe emfanekisweni esinayo.
Unelayibrari yoopopayi beCSS yezinto zomsebenzisi. Ungazibona zonke kwikhonkco ukuze ufumane ezona zikulungeleyo. Uneziphumo ezininzi onokukhetha kuzo ezikumgangatho ophezulu.
Ngomfanekiso ophakamileyo ophezulu, Uluhlu lokutsala amehlo lubonakalisiwe. Enye inokuba yinto oyithandayo.
Sibuya nesinye isiphumo ukugquma kwi-HTML nakwi-CSS apho imigca ejikelezayo ingabalinganiswa abaphambili.
Isiphumo sokugquma esingasetyenziselwa izinto ezahlukeneyo zewebhu. Kunye ubuncinci bokudala bunokudityaniswa kumakhadi njengale ikule nqaku.
Ukuhambisa isiphumo sokuhambisa umfanekiso
Umgangatho ophezulu kunye nopopayi we icon oya kukugcisa kutshintsho lokuqala. Uyakwazi zisa isicatshulwa kwisiphumo esihle.
Ukuhambisa isiphumo ngemibhalo engezantsi
Omnye umphumo omkhulu wokuhamba nge Imixholo engezantsi ebonakala ngoopopayi abagudileyo kwaye iphumelele.
Iziphumo zokuhambisa i3D
Enye yezona zinto zivuselelayo kwimifanekiso oyibonayo kuluhlu lonke. Inkqubo ye- Isalathisi sempuku siya kuba sisikhokelo se «cube ye3D».
Esinye isiphumo esilula, kodwa Umboniso omkhulu ngaphandle kokuchuma okuninzi.
Isiphumo sethunzi se-iOS nge React
Un isiphumo ngaphandle kwempumelelo enkulu, kodwa ikhonkrithi kakhulu kwisiphumo sesithunzi esivelisayo, kuba kubonakala ngathi inyuswe "emhlabeni".
Uhlobo lweShadow iOS 10
Isikhombisi semouse sinendlela Isiphumo 'sokutyhala' kumfanekiso ovelisa ubunyani obukhulu. Inika umdla kakhulu.
Iziphumo zotshintsho lomfanekiso
Un Iziphumo zotshintsho ezimangalisayo apho umfanekiso ubhangiswe kwigridi yeigridi. Unokulawula ixesha apho kwenzeka khona umphumo kunye nokunye.
Skrolela utshintsho lomfanekiso
Un nefuthe lotshintsho oluhle kakhulu kunye noyilo yewebhusayithi yakho. Ungaphoswa kukuqeshwa kule CSS.
Ukurola umfanekiso kunye nevili lempuku
Kuya kufuneka iphumeze ngalo mzuzu usebenzisa ivili lempuku ukutshintshela komnye umfanekiso ngopopayi olukhulu lotshintsho. Umtsalane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » 35 ngokwenene iyonwabisa imifanekiso yeCSS
USandy Hernandez sitsho
Mholo. Ndizithandile iimpembelelo oziposileyo. Ngethamsanqa uya kuyazi ukuba yenziwe njani into apho ubeka khona isikhombisi kumfanekiso kwaye usuka ezantsi uye phezulu, ulungele ukubonisa ukujonga kwangaphambili kwamaphepha ewebhu. Ndikushiya umzekelo wento endithetha yona, kwicandelo «IMISEBENZI YAMVA KWIWEBHSAYITHI
»Ukusuka kwiwebhusayithi selectawebs.com
Phendula uSandy Hernández
Iphepha elihle kakhulu kunye neposti, iluncedo kakhulu kum kuba bendifuna iimpembelelo zephaneli yokungena kwesango kwizicelo zangaphakathi. Enkosi kakhulu ngale minikelo.
irotger gabriel sitsho
Iziphumo ezigqwesileyo. Ndizifundise ngokwam, bendihlala ndiyithanda umbono wokuphuhliswa kwewebhu kakhulu, ndingathanda ingcebiso yakho malunga nokuba ungaqala njani kwaye ulandele ntoni ukuze ufunde. ngokubhekisele
Phendula kwi-rotger gabriel
Molo, enkosi ngomxholo wakho. Namhlanje fumana iphepha lakho. Kuyamangalisa. Akukho siphelo sokufunda kunye nemibuzo enokwenziwa kuyo. ;)
Molo Natalia! Ndonwabile ukuba uyakonwabela ukufundwa apha kwi-Intanethi ye-Intanethi. Umbuliso!
Uluhlu olunomdla lweziphumo ezilungileyo, kuya kuba kuhle kakhulu ukubona indlela yokuyisebenzisa kwi-wordpress ene-elementor
Amanqaku ayi-120 lamawaka ephepha enza i-rainbow tunnel ebonisa ukuhamba kwexesha